Mareykanka oo Dalbadey iney si Degdeg ah uga soo baxaan Ciidamada Eriteriya iyo xoogaga Amxaarada Gobalka TIGRAYGa. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo Dalbadey iney si Degdeg ah uga soo baxaan Ciidamada Eriteriya...
Mareykanka oo Dalbadey iney si Degdeg ah uga soo baxaan Ciidamada Eriteriya iyo xoogaga Amxaarada Gobalka TIGRAYGa.
Qoraalkiisii ​​ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo markii uu noqday Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony J. Blinken wuxuu ku yiri ” waa in si degdega ah uga soo baxaan ciidamada Eritereya iyo xoogagga Amxaarada ee Tigreega” waa tallaabooyinka ugu horreeya ee lagama maarmaanka u ah soo afjaridda “gaboodfallada la soo sheegay iyo xaaladda guud ee ka sii daraysa ee gobolka Tigray. ee Itoobiya.
Waa in ay weheliyaan baaqyo hal dhinac ah oo ah joojinta dagaalada dhamaan dhinacyada isku haya iyo balanqaad ah in la ogolaado in gargaar aan la is hortaagin la gaarsiiyo dadka ku sugan Tigray, ayuu yiri xoghayaha Blinken, isaga oo raaciyay si loo gaaro himiladaas “USAID waxay geyn doontaa koox ka jawaab celinta Masiibooyinka. u sii wado Itoobiya si ay u sii wado bixinta gargaarka naf-badbaadinta ah. ”
Waxa kale oo uu ku baaqay “Saaxiibada caalamiga ah, gaar ahaan Midowga Afrika iyo la-hawlgalayaasha gobolka, in ay nagala shaqeeyaan sidii aan wax uga qaban lahayn dhibaatada ka jirta Tigray, oo ay xayiraada laga qaado UN-ka iyo hay’adaha kale ee ay khusayso.”
Mareykanku wuxuu aad uga walaacsan yahay gaboodfallada la soo sheegay iyo xaaladda guud ee ka sii daraysa ee gobolka Tigray ee Itoobiya. Waxaan si adag u cambaareyneynaa dilalka, ka saarida qasabka ah iyo barakicinta, xadgudubyada galmada, iyo xadgudubyada kale ee aadka u daran ee xuquuqda aadanaha iyo xadgudubyada ay geystaan ​​dhinacyo dhowr ah oo ururo badan ay ka soo warameen Tigray.
Waxaan sidoo kale si aad ah uga walaacsanahay dhibaatada bani’aadamnimo ee ka sii dareysa Mareykanku wuxuu si isdaba joog ah ugala shaqeeyay dowladda Itoobiya muhiimada ay leedahay soo afjarida rabshadaha, hubinta marinka bani’aadamnimada ee aan la hor istaagi karin ee Tigray, iyo ogolaanshaha baaritaan buuxa, madaxbannaan, oo caalami ah dhammaan warbixinnada ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha, xadgudubyada, iyo xasuuqyada. Kuwa iyaga masuulka ka ah waa in lala xisaabtamaa.
Mareykanku wuxuu qirayaa war-murtiyeedkii 26-kii Febraayo ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee ay ku ballanqaadeen gargaar bani’aadamnimo oo aan la horjoogsan karin, waxay soo dhaweynayaan taageerada caalamiga ah ee baaritaannada ku aaddan xadgudubyada iyo tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, iyo in lala xisaabtamo si buuxda. Beesha caalamku waxay u baahan tahay inay si wada jir ah uga shaqeyso sidii loo hubin lahaa in balanqaadyadaasi la fuliyo.
Ka bixitaanka degdega ah ee ciidamada Ereteriya iyo xoogaga gobolka Amxaarada ee Tigreegu waa talaabooyinka ugu horeeya ee lama huraanka ah Waa inay weheliyaan baaqyo hal dhinac ah oo ah joojinta dagaalka dhammaan dhinacyada isku haya iyo ballanqaad ah in la oggolaado in gargaar aan la horjoogsan la gaadhsiiyo kuwa ku sugan Tigray.
Mareykanka waxaa ka go’an inuu la shaqeeyo bulshada caalamka si loo gaaro himilooyinkaas. Si taas loo gaaro, USAID waxay geyn doontaa Koox Kajawaabidda Ka Hortagga Musiibooyinka Itoobiya si ay usii wado bixinta gargaarka naf-badbaadinta.
Waxaan ka codsaneynaa bahwadaagta caalamiga ah, qaasatan Midowga Afrika iyo la-hawlgalayaasha gobolka, in ay nagala shaqeeyaan sidii aan wax uga qaban lahayn dhibaatada ka taagan Tigray, oo ay ku jirto in tallaabo laga qaado UN-ka iyo hay’adaha kale ee ay quseyso.
Mareykanka wali waxaa ka go’an inuu dhiso iskaashi waara oo lala yeesho dadka Itoobiya.
Previous articleSomaliland oo Muwaadin Jabuuti ku Xidhan kala Heshiisay u soo Wareejinta Dalka
Next articleDal Horumar Ku Gaadhay Ka Faa’iidaysiga Wakhtiga!